Shaxda Manchester United Ay Ku Qabsan Doonto Dunida Haddii Conor McGregor Uu Iibsado Xagaagan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaShaxda Manchester United Ay Ku Qabsan Doonto Dunida Haddii Conor McGregor Uu Iibsado Xagaagan
Shaxda Manchester United Ay Ku Qabsan Doonto Dunida Haddii Conor McGregor Uu Iibsado Xagaagan
Conor McGregor ayaa si kaftan ah u shaaciyey in uu danaynayo, inuu iibsado Manchester United intii uu socday khilaafkii ka dhashay European Super League.
Manchester United ayaa sannadkii hore lala xidhiidhiyey qoyska Boqortooyada Sucuudiga iyadoo qiime ahaanna lagu baayacay illaa 3 bilyan oo Gini, taas kaliya kaftan ku koobaysa damaca Conor McGregor ee ah in uu iibsanayo kooxdan, sababtoo ah ma haysto lacag intaas le’eg.
Isbarbar-dhigga lacagta ay haystaan McGregor iyo qoyska reer Glazer
Xiddigan UFC oo hantidiisu malaayiin Gini tahay, ayaa baraha bulshada hadal-hayn badan ka abuuray kaddib markii uu bartiisa Twitter-ka oo ay ku taxan yihiin illaa 8.6 milyan oo qof, in uu ka fikirayo sidii uu u iibsan lahaa Manchester United, taageereyaashana uu weydiistay in ay fikir ka siiyaan.
Conor McGregor ayaa yidhi: “Waxa aan ka fikirayaa in aan iibsado Manchester United! Maxay idinla tahay?”
Isla markiiba dad badan ayaa ka falceliyey qoraalka uu 32 jirkani ku daabacay bartiisa, waxaanay warbaahintu gorfeeyeen haddii ay suurtogasho in uu kooxdan iibsado, sida ay noqon doonto shaxda Manchester United ee xilli ciyaareedka dambe.
Wargeyska Daily Star ee kasoo baxa UK ayaa magacaabay lix xiddig oo waaweyn oo Manchester United iman doona haddii uu McGregor la wareego mulkiyadda iyo maamulka kooxdan, waxaana ugu horreeya kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos oo heshiiskiisu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Difaaca reer Spain ayaa lala xidhiidhinayaa bixitaan iyadoo aanu wali caddaynin inuu joogayo iyo in uu bixi doono intaba.
Waxa kale oo Manchester United ay heli doontaa weeraryahanka reer England ee Harry Kane oo mustaqbalkiisa Spurs uu mugdi ku jiro, lana sheegayo in uu doonayo in uu iskaga tago kooxda haddii ay usoo bixi weydo tartanka Champions League ee xilli ciyaareedka dambe.
Waxa kale oo Man United ay heli doontaa difaaca midig ee Everton ee Seamus Coleman oo booska kalabixi doona Aaron Wan-Bissaka, laacibka orodka iyo xoogga badan ee Wolverhampton Wanderers ee Adama Traore iyo Jamie Vardy, halka uu Old Trafford dib ugu soo laaban doono Jesse Lingard oo amaah kaga maqan.
Shaxda ay Manchester United ku ciyaari doonto haddii uu McGregor iibsado